डेढ दशकदेखि जसको वरीपरी नेपाली राजनीति घुमिरहेछ... - Makalukhabar.com
डेढ दशकदेखि जसको वरीपरी नेपाली राजनीति घुमिरहेछ…
सन्दर्भ : प्रचण्डको ६६औं जन्मदिन
मकालु खबर	 शुक्रबार, मङ्सिर २६, २०७७ १३:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज आफ्नो ६६औं जन्मोत्सव मनाउँदैछन् । एउटा कथन छ– कतिऔं जन्मदिनले होइन, के प्राप्तिपछिको जन्मदिन ? भन्ने कुराले व्यक्तिको जीवनमा अर्थ राख्छ । त्यसो त प्रचण्डको जीवनमा थुप्रै खासगरी राजनीतिक उत्तरचढाव अनि आरोह–अवरोहहरु भएका छन् । यहाँ संक्षिप्त रुपमा मूलतः प्रचण्डले आफ्नो जीवनको ६६ वर्षसम्ममा कस्तो राजनीतिक जीवन जिए भन्ने विषयबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी गाविस वडा नं. २ मा विसं २०११ मङ्सिर २६ गते (अर्थात् : आजकै दिन) जन्मेका दाहाल गणतन्त्र नेपालको पहिलो नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । दाहाल सानै छँदा उनको परिवार कास्कीबाट चितवन बसाइँ सरेको थियो ।
लामो समयको राजनीतिक सहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईसँगै दाहालले विसं २०२६ सालमा एसएलसी पास गरेका थिए । त्यसपछि उनले विभिन्न विषय भिन्न विद्यालयहरुमा पढ्दै गर्दा विसं २०३३ सालदेखि २०३५ सालसम्म गोरखाको आरुघाटमा एक विद्यालयमा अध्यापन गर्न थाले । जहाँ खिलराज रेग्मी सरकारका संस्कृति पर्यटनमन्त्री रहेका रामकुमार श्रेष्ठ प्रधानाध्यापक थिए ।
अध्यापनकै क्रममा प्रचण्ड विसं २०३८ सालमा नेकपाको पूर्णकालीन सदस्यता लिएर अध्यापन र राजनीतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाए । यद्यपि प्रचण्डमा विसं २०२८ सालमा नै वामपन्थी राजनीतिको छाप परिसकेको थियो भनेर उनैले नै धेरै अन्तरवार्ताहरुमा भनेका छन् ।
अनि ०४२ सालमा मोटो मशालले गोप्य ढंगले सशस्त्र विद्रोहको तयार गरेको थियो । सो सूचना प्रहरीले पाएपछि मशालका दर्जनौं कार्यकर्ता पक्राउ परे । यसलाई माओवादीहरू सेक्टर काण्डको रूपमा स्मरण अझै गर्छन् ।
तत्पश्चात् चितवनमा रहँदा धनबहादुर विक र रूपलाल विश्वकर्मासँगको सङ्गतका कारण पनि प्रचण्डको राजनीतिक मोह झनै चुलिएर गयो । विसं २०३५ सालदेखि प्रचण्डले पूर्णकालीन तथा भूमिगत जीवन शुरु गरे । त्यसपछि उनको सम्पर्क कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठसँग भयो । नेकपाको चौंथो महाधिवेशनपछि भक्तबहादुर श्रेष्ठसँग प्रचण्डनिकट रहे ।
त्यसपछि विसं २०३९ सालमा निर्मल लामा र मोहनविक्रम सिंहबीच विवाद आएपछि प्रचण्डले मोहनविक्रम समूहमा लागे । मोहनविक्रमसँग विवाद भएपछि प्रचण्ड मोहन वैद्यसँग नजिक हुन पुगे, जतिबेला वैद्य मोहनविक्रमबाट छुिट्टएर नेकपा ‘मशाल’ (मोटो मशाल)का महामन्त्री भइसकेका थिए ।
०४२ सालमा मोटो मशालले गोप्य ढंगले सशस्त्र विद्रोहको तयार गरेको थियो । सो सूचना प्रहरीले पाएपछि मशालका दर्जनौं कार्यकर्ता पक्राउ परे । यसलाई माओवादीहरू सेक्टर काण्डको रूपमा स्मरण अझै गर्छन् । सेक्टर काण्डपछि वैद्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइ प्रचण्डलाई पार्टीको महामन्त्री पद जिम्मा लगाए । त्यसयता प्रचण्ड लगातार माओवादीको नेतृत्वमा रहे । अहिले पनि नेकपा (पूर्वएमाले र माओवादीबीच गठबन्धन)को नेतृत्व पङ्तिमै छन् ।
विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि चार कम्युनिष्ट पार्टीहरू ‘मशाल’, चौंथो महाधिवेशन, सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र विद्रोही मशाल मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) बन्यो । प्रचण्ड महामन्त्री बने । सशस्त्र संघर्षमा जाने नजाने विवादका कारण नेकपा एकता केन्द्र विभाजित भयो, प्रचण्डहरुले माओवादीको नाममा जनयुद्ध शुरु गरे । नारायणकाजी समूह सशस्त्र संघर्षमा जान मानेन, जनमोर्चाको रूपमा सक्रिय भयो । त्यसपछि विसं ०५२ मा सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ थाल्नुभन्दा केही समयअघि प्रचण्डले गोरखाको गाइपुरमा केही युवालाई सैन्य तालिम दिएका थिए ।
माओवादी सशस्त्र संघर्षमै रहेको समयमा विसं २०५७ सालमा प्रचण्ड नेकपा माओवादीको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले देशमा एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्यो । विसं २०५७ सालमा भारतको जालन्धरमा सम्पन्न माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘प्रचण्डपथ’को राजनीतिक सिद्धान्त पारित गर्यो । सोहीअनुरूप माओवादीले विसं २०५८ सालमा आफ्नो छुट्टै ‘जनमुक्ति सेना’ गठन गर्यो, जसको सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डलाई नै बनाइयो । माओवादीको जनसेनाका केही लडाकू नेपाली सेनामा विलय भए ।
विसं २०६२ साल मङ्सिरमा संसदवादी दलसँग सातबुँदे सहमतिमार्फत् संविधान सभा निर्वाचन गर्ने शर्तमा प्रचण्ड विसं २०६३ साल असार २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक भएका थिए ।
विसं २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा प्रचण्ड काठमाडौं १० र रोल्पा २ बाट निर्वाचित भए ।
त्यसपछि विसं २०६५ साल साउन ३१ गते प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री र दोस्रो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भए । सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवसँग विवाद बढेपछि प्रचण्डले विसं २०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।
विसं २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रचण्ड सिराहा ५ बाट विजयी भए । तर, काठमाडौं १० बाट भने पराजित भए । नेपाली कांग्रेससहित केही साना दलको समर्थनमा विसं २०७३ साउन १९ गते प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए ।
यसपछि नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डहरु उसैगरी गुज्रिँदै गए । विसं २०७४ साल फागुन ७ गते आएर दुई फरक कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ७ बुँदे सहमतिसहित गठबन्धन भयो । एकतापछि नेपालमा मात्रै नभएर अन्य छिमेकी देशहरुबाट पनि नेपालमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुले एकता गरेर इतिहासमा दर्ज हुने काम गरेको भनी सकारात्मक टिप्पणीहरु आए ।
त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक समस्याहरुले जस्तो सन्देश दिएपनि एकताताका दुई कम्युनिष्ट पार्टीले सकारात्मक सन्देश दिएको देशी–विदेशी टिप्पणीहरु आएकै हुन् । त्यसपछिको तीन तहको निर्वाचनमा गठबन्धित दुई पार्टी (नेकपा)ले झण्डै दुईतिहाइ मत पनि पायो । नेकपालाई सरकार गठन गर्ने सौभाग्य आइपुग्यो । पाँच वर्षे कार्यकालमा ३०/३० महिना प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तसहित पहिलो प्रधानमन्त्री पूर्वएमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भए । तर, पछि पुनः केपी ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र दाहाललाई पार्टी सञ्चालको पूर्ण अधिकारसहित कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने सहमति भयो । सोहीअनुसार अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष छन् ।
खास–खास रुपमा दाहालले यसरी आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई व्यातित गरिरहेका छन् । प्रचण्डलाई अत्यन्त तेजिलो स्मरणशक्ति भएका र प्रखर वक्ताका रुपमा चित्रण गरिन्छन् । भारतीय पत्रकार अनिर्वाण रोयले दाहालको जीवनीमा आधारित ‘प्रचण्ड एक अज्ञात विद्रोही’ नामक पुस्तकसमेत प्रकाशन गरेका छन् ।
नेपाली राजनीतिका एक युग प्रचण्डलाई जन्मदिनको शुभकामना ।
नोटः प्रचण्डबारेको विविध जानकारी विकिपिडिया, विभिन्न लेख तथा पुस्तकहरुबाट लिएका हौं–सम्पादक
मकालु खबर 4545 खबरहरु0टिप्पणीहरू
नेपालद्वारा नेदरल्याण्ड्सलाई २०७ रनको लक्ष्य, नेपालको दोश्रो उच्च योगफल
तीनजना मृत फेला
रिभेन्जको गीत ‘हजारौँ हजारमा’ सार्वजनिक
नेपालमा ओपो एफ १९ को बिक्री शुरु
७ बलमा १८ रन बनाएर कुशल मल्ल आउट